निर्मलालाई न्याय खै ? [सम्पादकीय] – Everest Times News
ट्युसन पढ्न गएकी निर्मला पन्तको गत साउन १० गते प्राण गयो । ट्युसन पढेर घर फर्कँदा नै हराएकी उनको भोलिपल्ट उखुबारीमा शव फेला पर्‍यो । बलात्कार र त्यसपछि हत्या । चरम निर्मम तरिकाले उनको हत्या भएको देखिन्छ ।
हत्या भएको सार्वजनिक भएसँगै प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिहरू पक्रने र छाड्ने गरिरहेको छ । यसै क्रममा सरकारले अनुसन्धानमा गएकाहरूमाथि नै अनुसन्धान थाल्यो । तर, सरकार नागबेली बाटोमा हिँड्न थालेपछि जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा आउन थालेका छन् । यही क्रममा आन्दोलनमा एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
भदौ ३० गते माइतीघरमा निर्मलाका बुबा यज्ञराजले छोरीको न्यायको खोजीमा आफू काठमाडौं आउनुपरेको भन्दै न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गरे । आमा दुर्गादेवीले आफ्नो काख रित्तिएको र न्यायका लागि सबैले बोलिदिन आग्रह गरिन् ।
साउनको घटना, असोज शुरु भइसके पनि प्रहरीको अनुसन्धान टुंगो लागेको छैन । यद्यपि कञ्चनपुरमा न्याय नपाइने देखेर निर्मलाका बाआमा काठमाडौं आएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापादेखि अधिकारकर्मीहरूसँग भेटेका छन् ।
काठमाडौं आउनसाथ पत्रकार सम्मेलन गरी निर्मलाका बाआमाले राजनीतिक संयन्त्रदेखि प्रहरीसम्मलाई छोरी हत्याको औला तेस्र्याएका छन् । सरकारले उक्त घटनामा गलत छानबिन गरेको बताउनेहरूलाई निलम्बन बाहेक केही गरेका छैनन् ।
निर्मलाको हत्यामा प्रमाण नष्ट पार्नेदेखि बलात्कारमा संलग्न दोषी पत्ता लगाउने नागबेली बाटो समातेकाले सरकारमाथि पनि शंका लाग्न थालेको छ । कतै आफ्नै कार्यकर्ता जोगाउनतिर त सरकार लागेको छैन ?
‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन्’ र ‘सानुलाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भने झैं अहिले देश उर्लादाँ पनि निर्मलाको निम्ति सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । दुई तिहाइको सरकार भएको छनक देशमा देखिँदैन । तर, कसैले पनि सत्ता ढाल्न नसक्ने देखिएकाले सरकार प्रमुखको राजीनामा मागिएको छैन । यस्तो पाशाविक घटना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर देखिएका छैनन् । यी क्रमवद्धताले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्याकर्ताकोसमेत शिर निहुरेको छ ।
बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । कानुनअनुसार दण्ड सजाय दिँदा सरकार र प्रहरी संयन्त्रको के बिग्री जान्छ र ? के चुनाव प्रचारको बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने झैँ वामपन्थीले जितेमा रुन पनि पाउँदैन भन्ने भनाई सत्य हुन लागेको हो । नत्र भने निर्मलालाई न्याय दिन किन कन्ज्युसाई ?
भेनेजुएलामा अन्तरिम राष्ट्रपति, अमेरिकाको समर्थन